Shirka Gollaha Wasiirrada oo looga dadlay Dhibaatada Ciidanka Kenya
MUQDISHO, Somalia - Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada oo looga hadlay dhibaatada ciidanka Kenya ay ku hayaan Xarumaha shirkadda Isgaarsiinta Hormuud, hawlaha muhiimka ah ee sannadkaan la doonayo in la qabto iyo hab-raaca heshiisyada Caalamiga ah.
Wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo teknoologiyadda XFS, Eng. Cabdi Canshuur Xasan, ayaa intaa kadib goloha wasiirrada war bixin ka siiyay xaruma ay leedahay shirkadda Isgaaarsiinta Hormuud oo ay burburiyeen ciidanka Kenya.
Qarax iyo Dilal ka dhacay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 16.11.2018. 01:16
Warar ayaa sheegay in Kooxda Daacish ay lasoo xiriirtay Shirkadda kadibna ay...